IPlus Fab nezingubo zomshado zabondlekile
UCELESTE Ntuli okhangise ngengubo yomshado yakwaPlus Fab.
Bongiwe Zuma | March 30, 2021
UNGOTI welebuli yemisiko yabesifazane abondlekile ngomzimba ebalwa nahamba phambili eNingizimu Afrika usememezele izindaba ezizothokozisa omakoti abayizidudla.
U-Ouma Tema welebuli iPlus Fab ehlanganisa iminyaka eyishumi kule nyanga yasungulwa, usememezele ukuthi kungekudala bazoba nezingubo zomshado. IPlus Fab, egaba ngemisiko esezingeni nephethe izitayela ezehlukene ezitholakala naseThe Space, ingenye yamalebuli aheha ngisho osaziwayo.
UMNIKAZI wePlus Fab Ouma Tema oseqhamuke nezingubo ezintsha zomshado zabesifazane abondlekile Isithombe: INSTAGRAM/ OUMA TEMA
IPlus Fab njengoba ihlanganisa iminyaka yabakhona isizothungela abesifazane abondlekile izingubo zomshado. Kujwayelekile ukuthi abesifazane abayizidudla bagcine sebegqoka noma ngoluphi ihlobo lwezingubo ngenxa yokuntuleka kosayizi.
Useqalile nokunameka ezinye zezingubo zomshado ezithungwe ngendlela esezingeni eliphezulu nelivamise ukubonaka emcimbini yezemfashini.
Abanye bosaziwayo babonakele bekhangisa lezi zingubo okubalwa usomahlaya ophinde abe ngumlingisi uCeleste Ntuli, kanjalo nomculi weGqom uBusiswa. Kuzokhumbuleka ukuthi ngo-2019 u-Ouma nelebuli yakhe baqopha umlando ethatha indondo ye-Entrepreneur Of The Year kwizindondo zosomabhizinisi bakuleli.